Xildhibaan Mustaf Dhuxulow oo sheegay in horumar wanaagsan uu gaaray gobolka Banaadir – Kalfadhi
January 30, 2019 Kalfadhi
Xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow, oo katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya oo xalay ka qeyb galay Munaasabad lagu qabtay Xarunta Gaadiidka Booliiska islamarkaana loogu soo bandhigayay waqabadka maamulka gobolka Banaadir sanadkii la soo dhaafay ayaa amaanay mas’uuliyiinta gobolka ee dhabar adeegga muujiyay sanadkii la soo dhaafay.
Xildhibaan Dhuxulow ayaa sheegay in Soomaaliya ay hore u socoto islamarkaana ay muujisay soo kabasho xoog leh iyo horumar wanaagsan. Guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo ku xigeenadiisa ayuu ku amaanay doorkii ay qaateen soo kabashada gobolka Banaadir, waxa uuna sheegay in shaqooyin badan loo abuuray dhalinyaro badan oo ku nool magaalada Muqdisho.
“Dhalinyaro badan oo shaqo loo abuuray, daraseenta iyo isku xirka dadweynaha iyo mas’uuliyiinta gobolka ayey ku guuleesteen maalmihii ay joogeen gobolka Banaadir Yariisow iyo ku xigeenadiisa”, ayuu yiri Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho. “Canshuuraha iyo dib u habeynta shaqada iyo shaqaalaha ayaa lagu guuleestay”, ayuu yiri Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo ah Xildhibaan katirsan Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaan Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow oo katirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Soomaaliya waxa uu kamid ah Xildhibaano, Wasiiro iyo Siyaasiin kale oo xalay ka qeyb galay Munaasabad ka dhacay Xarunta Gaadiidka Booliiska Soomaaliya taas oo lagu soo bandhigayay Waxqabadka gobolka ee sanadkii la soo dhaafay.
Xildhibaan Fowsiyo: Canaanta Madaxweyne Yoweri Museveni yaan loo arkin colaad